Sandals Resorts na Sandals Foundation: Na-enye ndị mmadụ ikike
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Sandals Resorts na Sandals Foundation: Na-enye ndị mmadụ ikike
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ Bahamas Breaking • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Education • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Sandals Resorts International nke emepụtara Akpụkpọ ụkwụ Sandals, ma ọ nwere nkà ihe ọmụma a: Anyị ahụla na mgbe anyị na-etinye ego na otu onye, ​​anyị na-enye ikike maka netwọkụ mmadụ niile - ezinụlọ ha, ndị enyi ha, obodo ha, na mba ha niile bụ ndị ga-erite uru site na onyinye ha.
Joseph Wright, Great Shape kwuru, sị: "Akụkụ kachasị mma isonye na ọrụ a bụ ịmara na na ngwụcha ụbọchị, n'agbanyeghị ọrụ siri ike na mgbe ụfọdụ nnukwu nsogbu, anyị na-enyere aka mee ka ndụ ndị mmadụ ka mma." Inc, Onye isi oche.
Ihe ịma aka ndị Caribbean na-eche ihu dị iche iche ma dị mgbagwoju anya dị ka ndị ha na-emetụta. Ndị obodo ga-emerịrị nsogbu dịka ịda ogbenye, enweghị oke, na ime ihe ike kwa ụbọchị. Site na isoro ụlọ ọrụ gọọmentị na-arụkọ ọrụ ọnụ, ndị isi obodo, na ndị na-enye onyinye nkeonwe, Sandals na-enyere aka ịmepụta azịza ọhụụ ọhụụ na-enyere ndị ntorobịa nọ n'ihe ize ndụ, ụmụ nwanyị, ndị ọchụnta ego obodo, na ndị enweghị isi aka.
Mmemme Sandals na Projects
Schoollọ akwụkwọ nke ndị ọchụnta ego na-azụ ahịa (Ọzụzụ reprenezụ ahịa)
“Nye mmadụ azụ azụ, i wee nye ya nri maka otu ụbọchị. Gụ madzụ l'ẹka ndu ,zurẹlu l'ẹphe ha. Ezubere ọzụzụ azụmaahịa iji nye ndị mmadụ n'otu n'otu iji zụlite ikike dị mkpa iji mata, ịmalite, ma zụlite azụmaahịa na-aga nke ọma, na -emepụta onwe ha na ndị otu ndị ọzọ ọrụ ha.
Njikọ ndị ntorobịa
Ntinye aka nke ndị ntorobịa na-abara obodo, otu na mba dị iche iche uru. Ikike nke itinye aka na ndị ntorobịa nọ n'ihe ize ndụ dị oke mkpa iji hụ na mba ọ bụla nwere ọdịnihu dị mma. Ndị na-eto eto na-erite uru ma nweta ikike ndụ na ohere agụmakwụkwọ site na egwuregwu, egwu, ọzụzụ nka, na mmemme mmemme ndị ọzọ.
Babiesmụaka amụrụ tupu ha amụọ na Antigua nwere ohere ịlụ ọgụ ka ukwuu na-eso onyinye nke comprehensivelọ Ọrụ Nlekọta 2mụaka 20,000 zuru oke site na Sandals Foundation (nke ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 299) na Pediatric Unit of the Mount St. John's Medical Center. Igwe ndị a na-enye nlekọta dị oke egwu nye ụmụ ọhụrụ tupu oge mkpa. Ruo ugbu a, ụmụ ọhụrụ XNUMX ejirila nkeji ndị a.
Otu akụkụ kachasị mkpa nke obodo siri ike bụ ezi ahụike, yabụ, Sandals Foundation na-arụ ọrụ na-arụkọ ọrụ n'akụkụ ụlọ ọrụ ahụike dị ka Mount St. John iji nyere aka wulite ikike ha site n'inye ohere ịnweta ọzụzụ, onyinye nke ngwa achọrọ dị ukwuu, yana onyinye nke teknụzụ emelitere nke jikọtara ụlọ ọgwụ dị na nke mba.
Igwe ndị a na-elekọta ụmụaka na-enye nlekọta dị oke mkpa, dị ka njikwa ọnọdụ okpomọkụ, nyocha nke ihe dị mkpa, ịtụle, na enyemaka iku ume nye ụmụ ọhụrụ tupu ha amụọ.
Mmemme Egwu Flanker
Flanker Marching Band bụ otu ndị na-eto eto na-ekwe nkwa site na ime obodo - Flanker community na Montego Bay, Jamaica. N'oge njem Mega Fam, ndị ọrụ njem gbakọtara iji nye onyinye na Flanker's Resource Center.
Ego maka mmemme a enyela ngwa egwu ọhụrụ na ndozi maka ngwa ndị dị ugbu a, nkuzi na ngwa maka nkuzi kwa izu na klaasị bara uru, yunifọm maka ndị otu, ndị nhazi otu, na ego nyocha maka ule nyocha ọkwa. Ndị agha ahụ na-emezi ugbu a n'ogo ebe a kwụrụ ụgwọ iji kpọọ na Sandals Montego Bay ebe ntụrụndụ otu ugboro n'izu.
“Kemgbe ọtụtụ afọ m nwere ahụmịhe n’egwú, amaara m ndị otu na-enyere aka na ọkwa enyemaka maka mmemme mmachi, mana Sandals Foundation ewerela ụdịrị enyemaka ha n’ọkwa dị iche. Obi dị m ụtọ na Sandals Foundation abụrụla ndị mbụ gafere ogologo oge iji mee ka Flanker Marching Band Programme dịghachi ndụ, ”ka Mikel Turner, Onye isi Band kwuru.
“Tupu m sonye n’òtù egwú ahụ, amaghị m ụzọ ịbụ akụkụ nke otu egwuregwu na otu esi ekwere na onwe m na ikike m. Ndị otu ahụ na-enye m ihe m ga-atụ anya ya na ụzọ dị mma iji gosipụta onwe m, "onye otu egwu Renaldo Hendrick kwuru.
Sandals Foundation emeela nkwa na mpaghara Caribbean niile iji zaghachi ngwa ngwa na mberede obodo nke ọdachi ndị na-emere onwe ha kpatara.
Ntọala ahụ na-akwado ndị ọbịa, ndị ọrụ azụmaahịa, ndị ọrụ njem, ndị na-ebubata ya na ndị otu ndị ọzọ na-enyere ndị obodo ọdachi dakwasịrị aka. Ọzọkwa, òtù dị iche iche nọ na ala na-etinye aka iji hụ na mgbalị ga-adigide.
Ndị SickKids Caribbean
Sandals Foundation na-aga n'ihu na mmekorita ya na mmemme SickKids Foundation Caribbean, na-emetụta agwaetiti nke Bahamas, Barbados, Jamaica, St. Lucia, St. Vincent, na Grenadines. Ebumnuche bụ ịnye ọzụzụ na akụrụngwa iji chọpụta nke ọma na ịgwọ ụmụaka nwere ọrịa kansa na ọrịa ọbara siri ike gafee Caribbean.
Sandals Foundation enyerela aka na ntinye ego 3:
Ime ụlọ Telemedicine
Mepụta ụlọ telemedicine dị na St. Lucia ka ndị ọkachamara ahụike mpaghara nwere ike ibute SickKids maka ndị ọrịa maka ndụmọdụ, yana jikọọ ndị dọkịta na agwaetiti ndị agbata obi.
Ọzụzụ nke pediatric oncologist, Dr. Chantelle Browne, onye ga-alaghachi n'obodo ya, Barbados, mgbe ọ gụchara mkpakọrịta afọ 2 na forlọ Ọgwụ maka Smụaka Ọrịa na Toronto wee bụrụ onye nke abụọ ọkachamara oncologist na Eastern Caribbean.
“Dịka akụkụ nke Division nke Hematology na Oncology na SickKids, m ga-enwe ohere ileba anya ma mikpuo onwe m na njikwa nke ihe karịrị 22,000 kwa afọ na-eleta ndị ọrịa na Sears Cancer Clinic yana ihe dịka ụmụaka 350 bụ ndị a na - achọpụta kansa kansa kwa afọ. na Toronto, ”ka Dr. Chantelle Brown kwuru.
Womenmụ nwanyị Na-enyere Ndị Ọzọ Aka (WHOA)
Sandals Foundation na Bob Marley Foundation jikọtara ọnụ iji dozie nsogbu na-adịghị ala ala nke enweghị oke nha anya na Caribbean. WHOA na-enye nkwado, ndụmọdụ, agụmakwụkwọ, na ọzụzụ nka iji nye ụmụ nwanyị a na-adịghị ahụkebe aka n'ofe mpaghara ahụ.